Ziziphi iindlela zokwakha izitalathisi eziza kubaluleka ngo-2018?
Kulindelwe ukuba uluhlu lwemiyalelo entsha yokwakha izakhiwo luya kusetyenziswa kunyaka ozayo. Nangona kunjalo, izinto ezisisiseko ziya kuhlala zifana. Unyaka ozayo uza kusibuyisela ukuguqulwa okukhulu kwedijithali kunye neendlela ezintsha zokwenza ngcono. Okubizwa ngokuba yingqiqo yobuchule kuya kuchaphazela yonke i-injini ye-injini yokucinga, efuna iindlela ezintsha kwi-SEO yeselula kunye ne-desktop kunye newebhu. Abaphathi beWebhsayithi baya kufuneka bafune iindlela ezintsha zokuvelisa izikhokelo. Kwakhona kulindeleke ukuba i-algorithm ye-Google ye-mobile-first-ranking iyashintsha ngokubanzi ingxelo yakho yangoku ngeemakethe zedijithali kwaye wenze utshintsho kwihlabathi le-SEO - best web development firms.
Eli nqaku lenzelwe ukubonisa abafundi indlela iimakethe zedijithali ezitshintsha ngayo kunyaka ozayo kwaye sifanele silindele ntoni kule nguqu.
I-backlink njenge-injini ye-SEO ngo-2018
Ngethuba leminyaka embalwa edluleyo,. Nangona kunjalo, izinto ezisisiseko zihlala zifana. Injongo ephambili yokukhangela injini yokukhangela kusekho ukubonelela ngomxholo osisiseko nophando olulwazi kubafundi. Ukuba umxholo wakho ufanelekile ukuwufunda, kuya kubakho ukuba wabelane phakathi kwabasebenzisi abaza kukuzisa ijusi yoluncedo lwe-organic.
I-backlink izakuhlala iinjinjini zokuphuculwa kweenjini zokusesha ngo-2018 nangaphezulu. Ubunjani bokubuyisela umgangatho kunye kunye nesakhiwo esilungiselelwe kakuhle nesakhiwo kunye nokuyila izakuzisa izithuthi ezijoliswe kwiziko lakho kunye neendawo zabasebenzisi bewebhu. I-Google iya kugqiba umgangatho wewebhusayithi kunye nokufaneleka, kusekelwe kwigunya lewebhu kwiikhonkco zakho. Le ndlela ihlala isigxina ukususela ekuhlaziyweni kokugqibela kweGoogle Panda.
Iinjongo zokwakha iinqununu ezilindelekileyo ngo-2018
I-backlink izakubeka igama lakho, igunya kunye nokuthembeka kwakho kwiwebhusayithi;
Zonke iimveliso zedijithali ziya kuqhutyelwa ngumgangatho womxholo;
Ukhuphiswano luya kuba lukhulu kunamhla;
Ukubaluleka kwamagama aphambili kubaluleke kakhulu;
Qinisekisa ijusi kufuneka ifike kuphela kwiiwebhusayithi ezithembekileyo.
Iindlela ezizayo zokuqinisekisa ukwakha i-backlinks esemgangathweni
Sisekude ukususela ngo-2018, kodwa sele ufanele ukwazi ezinye iinguqu ezizayo esiza amava ekuqhubela phambili. Kufuneka uqonde ukuba zeziphi izicwangciso zokwakha izixhobo eziza kuba namandla kumashishini akho kunye noko kufuneka uyeke ukuphumeza ngenjongo yokukhushulwa. Izicwangciso zokuqhagamshelanisa iziqhagamshelo ezizayo ziza kukunceda uqhubeke nokuhlaziywa kweempawu zokuthengisa zedijithali.
Yakha ikhonkco yakho ngesandla
Namhlanje, abaninzi be-webmasters kunye neengcali ze-SEO baya kwi-automation yabo. Ngokuqinisekileyo, kunokusindisa ixesha lakho, kodwa akuyi kuzisa iziphumo ezintle njengoko unako ukwenza yonke into ngesandla. Ndikwacebisa ukuba ungenzi ngokuzenzekelayo iinkqubo zakho zeposi usebenzisa iifom ezifakwe kwifom ezenziwe yiprogram. Ii-imeyili ezinjalo aziyi kutsalela ingqalelo yomsebenzisi kwaye zenze ingcinga engafanelekanga ngegama lakho. Endaweni yalo, bhala i-imeyile yakho, ubeke umphefumlo wakho nganye. Nangona kunjalo, akukhawulelwanga ukusebenzisa uxwebhu oluqhelekileyo kule njongo.
Yenza isigxininiso kumgangatho womxholo wakho
Ngo-2018 umxholo uya kuhlala udlala indima ebalulekileyo kwi-SEO. Ngoko, ngaphambi kokuba uqale ukukhangela indawo ezinokuthi ubeke i-backlink, qiniseka ukuba unesizathu sokuba kutheni baxhomekeke kuwe kwindawo yokuqala. Isiqulatho sihlala kwindawo efanelekileyo ukuqala inkqubo yakho yokuphuculwa kwewebhusayithi. Ukwenza abantu baqaphele ibhendi yakho, kufuneka udale amanqaku aphambili kunye nophando olunexabiso elithile kubafundi.